Gcwalisa uLuhlu lweZikolo zezoNyango eCanada ngeenkcukacha zabo 2022
Nalu uluhlu olupheleleyo kunye neenkcukacha zazo zonke izikolo zonyango ezivunyiweyo eCanada, iimfuno zabo, izifundi, inqanaba lokwamkelwa, inkqubo yokwenza isicelo, kunye nokunye.
ICanada yaziwa kwihlabathi liphela ngobungangamsha bayo bezemfundo, amaziko aphambili kwizindlu ezibonelela ngemfundo ekumgangatho ophakamileyo kuwo onke amanqanaba emfundo iziqinisekiso zawo zamkelwe yimibutho kunye namaqumrhu karhulumente kwihlabathi liphela.
Olu dumo luye lwaqhubeka nakwizikolo zonyango eCanada, ukuvelisa iingcali zonyango eziphezulu eziye zanegalelo ekuphuculeni impilo yabantu kunye nokupheliswa kwezifo kumaphondo abo, eCanada nakwihlabathi liphela.
Malunga neZikolo zezoNyango eCanada
Yeyiphi i-GPA efunekayo kwizikolo zonyango eCanada?
Ngaba kunzima ukungena kwizikolo zonyango eCanada?
Mingaphi iminyaka yesikolo sezonyango eCanada?
Zithini iimfuno zokufunda amayeza eCanada?
Sisiphi isikolo sezonyango eCanada ekulula ukungena kuso?
Ndingaya ngqo kwisikolo sezonyango emva kwesikolo samabanga aphakamileyo?
Gcwalisa uLuhlu lweZikolo zezoNyango eCanada
IYunivesithi yaseCalgary, iCumming School of Medicine
IYunivesithi yaseManitoba, kwiKholeji yaseMax Rady yezoNyango
IYunivesithi yaseSherbrooke, iFakhalthi yoNyango kunye neSayensi yezeMpilo
IYunivesithi yaseSaskatchewan, kwiKholeji yezoNyango
Ezi zikolo zonyango eCanada zineendlela ezahlukeneyo, ukuba ayizizo zonke iikhosi zonyango, iinkqubo onokufuna ukuzifunda kwicandelo lezonyango. Konke okudingayo kukufumana indawo kwaye ukhethe isikolo esibonelela ngezifundo ezithile ozifunayo, uqinisekise ukuba ulungele ikhosi kwaye wenza isicelo njengoko kuchaziwe.
Nangona kunjalo, ngokwemigaqo yokukhululeka, iCanada iphezulu kuluhlu lwezona ndawo zibalaseleyo zabafundi kwihlabathi liphela kwihlabathi. Ivula iingcango zayo kubafundi abavela kwihlabathi liphela ukuba beze kwiiyunivesithi zakhe ezidumileyo kwaye bajoyine imfundo yakhe ekumgangatho wehlabathi.
Ukufundela amayeza eCanada kunokuba sisigqibo esifanelekileyo kuwe, uya kufumana isidanga esikumgangatho wehlabathi, ufunde kwiziko eliphezulu laseCanada kwelinye lezona ndawo zibalaseleyo zokufunda kwihlabathi. Kuya kufuneka ujoyine inkcubeko eyahlukeneyo yabantu baseCanada kwaye ufumane izakhono zonyango kunye nolwazi oluya kuthatha ikhondo lakho lomsebenzi liye kwinqanaba elilandelayo.
Kukho izikolo ezahlukeneyo zonyango eCanada ezineemfuno ezahlukeneyo kwaye ke amanqaku abo e-GPA ayahluka. Ubuncinane ngokubanzi be-GPA kwizikolo zonyango ziqala kwi-3.6 - 4.0.
Izikolo zonyango eCanada zikhuphisana kakhulu, nangona kunjalo, kubemi baseCanada, ukungena kwisikolo sezonyango eCanada kulula kakhulu xa kuthelekiswa nabafundi bamanye amazwe.
Ngapha koko, uninzi lwezikolo zonyango zaseCanada azinalo nolondolozo olunye kubafundi bamanye amazwe. Abo bangaphezulu kunokuba besenza, kuya kuba nzima ukugcina izihlalo ezi-5 ubukhulu becala. Ngaphandle kokuba uza kwisikolo sezonyango saseCanada esisekwe kwisivumelwano phakathi korhulumente welizwe lakho kunye neso sikolo, akunakufane wamkelwe.
Kwabambalwa abanokwamkelwa kwiimeko ezinqabileyo kakhulu, imirhumo ekufuneka ihlawulwe ixhome kakhulu kangangokuba inkcitho iyonke iyacanda $100,000 kwaye eso sisisixa esikhulu, ukutsho nje okuncinci.
Izikolo zonyango lweCandian zibeka umdla kuqeqesho ngakumbi lwabemi baseCanada kunye nabahlali abasisigxina. Ngapha koko, ungajonga inqaku elivelisayo esilenzileyo ngendlela enokwenzeka ngayo ukuya kwisikolo sezonyango eCanada simahla.
Ukuba unethemba lokungena kwisikolo sezonyango eCanada kungekudala, ungazijonga ezi 11 zahlukeneyo Izifundo zonyango eKhanada ukuba unokufaka isicelo.
Ukuba umdla wakho awukho nje ngokunamandla eCanada kodwa ukufumana imfundo esemgangathweni yezonyango phesheya, ungajonga ezinye zezi Izikolo zonyango eTexas.
Ukuba uvela eAfrika okanye ufuna ukufunda eAfrika, unokuzijonga kwakhona Izikolo zonyango eMzantsi Afrika ukuqala.
Ngokubanzi, kuthatha iminyaka emi-4 ukugqiba inkqubo yezonyango eCanada kodwa kwiiyunivesithi ezinje University of McMaster kwaye i KwiYunivesithi yaseCalgary baqhuba iinkqubo zabo zonyango iminyaka emi-3.
Kuqala, ukubhalisa kwisikolo sezonyango eCanada umfundi kufuneka ukuba ufumene isidanga se-bachelor kwi-biology okanye kufuneka agqibe nayiphi na enye intsimi enxulumene nesidanga sokuqala.
Abafundi mabathathe iimvavanyo zokwamkelwa njengovavanyo lweMCAT okanye lweCASPer kwaye bapase amanqaku aphakathi asekwe liziko labo lokubamba. Ezinye iiyunivesithi zamkela zombini i-MCAT kunye ne-CASPer, ezinye zamkela nje i-MCAT okanye i-CASPer
Ke, kubalulekile ukuba ungene kwiziko lakho lenginginya kwaye ujonge ezinye iimfuno ezinokufuna okanye ezingafunekiyo yinkqubo yakho.
Akukho sikhundla sisemthethweni soku kodwa besebenzisa inqanaba lokwamkelwa kwabo ndakwazi ukuza noluhlu lwezona zikolo zi-5 ziphambili kwezonyango eCanada ukungena kuzo, kwaye kunjalo;
IYunivesithi yaseSaskatchewan ngezinga lokwamkelwa le-14.1%
IYunivesithi yaseBritish yaseColumbia ngezinga lokwamkelwa le-12.4%
IYunivesithi yeSikhumbuzo yaseNewfoundland ngezinga lokwamkelwa le-11.3%
IYunivesithi yaseManitoba ngezinga lokwamkelwa le-11.3%
IYunivesithi yase-Alberta ngezinga lokwamkelwa le-11.2%
Hayi, awukwazi. ECanada, ngekhe uye kwisikolo sezonyango emva kwesikolo samabanga aphakamileyo, kuya kufuneka uqale ugcwalise kwaye ufumane isidanga seminyaka ye-4 njengoko zonke izikolo zonyango eCanada zizikolo ezithweswe izidanga.
Ngayo yonke le mibuzo iphendulweyo, ngoku sinokudlulela kwesona sihloko siphambili, ngaphandle kokuqhubela phambili ndiza kudwelisa kwaye ndinike iinkcukacha zazo zonke izikolo zonyango eCanada.
Kukho izikolo zonyango ze-17 eCanada kwaye kunjalo;
Ifumaneka e-Edmonton, e-Alberta, esi sesinye sezona zikolo zindala kwezonyango eNtshona Canada, esekwe kwi-1913 kwaye inamasebe e-21, amacandelo e-2 azimeleyo, amaqela ophando e-9 kunye namaziko ophando e-24 kunye namaziko.
IYunivesithi yase-Alberta, iFakhalthi yezoNyango kunye neDentistry ibonelela ngeenkqubo ezamkelweyo ngokupheleleyo kwisidanga sokuqala, isidanga kunye nenqanaba lokuthweswa isidanga kunye nemisebenzi eqhubekayo yokuphucula uqeqesho, eqeqesha kwaye iphuhlise ngokupheleleyo abafundi ukuba babe ngoogqirha, abaphandi, oogqirha bamazinyo, abacoca amazinyo kunye nososayensi bezonyango.
Esi sikolo sezonyango sinika abafundi ulwazi olunzulu, izakhono ezizodwa kunye nobuchule obufunekayo ukuze baphumelele kwicandelo labo lokufunda kwaye babuyisele eluntwini nakwihlabathi ngokubanzi.
Eyasungulwa ngo-1967 kwaye ikhona eCalgary, eAlberta, iSikolo saseCumming sezoNyango kwiYunivesithi yaseCalgary esinye sezikolo zezonyango ze-17 eCanada. Sisikolo sonyango esimalunga nophando esikhuthaza abafundi ukuba babe ngababoneleli beenkonzo zempilo abahle kuluntu lwabo nakwihlabathi liphela.
Esi sikolo sonyango sinikezela ngeenkqubo ezahlukeneyo zonyango ezinje ngeGqirha lezeMithi (MD), iBachelor yezeMpilo kwiSayensi (BHSc), iiNzululwazi zeNeurological kunye neMpilo yeNgqondo, iPathology, iiSayensi zeMpilo yoLuntu, iMicrobiology kunye nezifo ezosulelayo kunye nezinye kubandakanya iCandelo lezeMfundo kwiZifundo zezoNyango. ebonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zokuthweswa isidanga kunye nesidanga sokuqala.
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseBritish Columbia kwaye amaxesha amaninzi sithathwa njengesona sikolo sonyango sigqwesileyo eCanada. Yayisungulwa e-1950 kwaye liziko lesibini ngobukhulu lase-Canada kwezemfundo yezonyango e-Vancouver, eBritish Columbia.
I-faculty ifumene isixa esikhulu sokwamkelwa njengoko ikwindawo yesibini yezona nkqubo zonyango zibalaseleyo eCanada nase27th emhlabeni kwaye ikwabeka phakathi kwezona zikolo ziphambili kwezonyango eCanada njengowesihlanu ngobukhulu kubhaliso lwe-MD eMntla Melika.
Icandelo lezonyango le-UBC libonelela ngezifundo ezahlukeneyo zesidanga sokuqala kunye nesidanga kwicandelo lezonyango eliphuhlisa abafundi ukuba babe ziingcali zezempilo eziya kuthi zithathe indawo yezonyango ziye kwinqanaba elilandelayo.
Esi sesinye sezikolo zonyango eCanada kunye nenxalenye yeDyunivesithi yaseManitoba eseWinnipeg, eManitoba. Yayisungulwa kwi-1883 kwaye yamkela kuphela abafundi be-110 kwiinkqubo zonyango ngonyaka.
I-faculty inamasebe kuluhlu olwahlukeneyo lwamacandelo ezonyango onokuthi ukhethe kuwo njenge-psychiatry, i-cardiology, amayeza angaphakathi, i-immunology, i-microbiology yonyango, i-radiology, utyando, amayeza osapho, isifo kunye nezinye.
Ezi nkqubo zonyango ezikumgangatho wehlabathi ngokuqinisekileyo ziya kukuphuhlisa ube ngugqirha onesakhono esiphezulu kwicandelo lakho elikhethiweyo ukuze ukwazi ukukhuthaza impilo esempilweni ebantwini kwihlabathi liphela.
Esi sikolo siphakathi kwezikolo zonyango ezaziwayo eCanada kwaye sesinye sezikolo ezibini zonyango eAtlantic Canada esekwe kwi1967 kwaye yamkelwe njengesiseko sophando kwezempilo kwiphondo. I-faculty ibonelela ngeenkqubo zoqeqesho lokuhlala isidanga kunye neenkqubo ezahlukeneyo zesidanga sokuqala, iinkosi zemfundo kunye nezidanga zobugqirha.
IYunivesithi yeSikhumbuzo yaseNewfoundland, iFakhalthi yoNyango igqwesa ekufundiseni ngeklinikhi kwaye izinikele ekunikezeleni ngokugqwesa okuhlanganisiweyo kwezemfundo, uphando kunye nokhathalelo olunolwazi, eyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zezempilo zoluntu lonke kwaye zide ziye nakwezinye iindawo zehlabathi.
Eyaziwa nangokuthi yiDalhousie Medical School kunye necandelo eliphambili kwiDyunivesithi yaseDalhousie, icandelo lezonyango laseDalhousie sesinye sezikolo zonyango eCanada, eyasekwa ngo-1868 kwaye ikwiHalfax, eNova Scotia.
Eli ziko linxulumene nezibhedlele ezingaphezu kweshumi elinambini ezibonakalayo kweli phondo ezihlala zikulungele ukuqesha abafundi abaphumelele kwiziko. Le yeyona nto imangalisayo ngesi sikolo.
Isikolo sezonyango i-Dalhousie likhaya loluntu oludlamkileyo, olunobuchule, kunye noluntu oludibeneyo olwenza ifuthe kwimpilo yabantu kunye noluntu eCanada nangaphaya kwaye lubonelela ngeenkqubo eziphambili kwezonyango nakwezophando kwizifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga.
Isikolo sibonelela ngamathuba oqeqesho olugqwesileyo lwabafundi bezonyango, abahlali, abafundi abaphumeleleyo kunye nabanye, sibenza ukuba babe zezona ziingcali zezempilo ziya kuthi zikhuthaze ngokufanelekileyo impilo yabantu.
Esi sesinye sezona zikolo zidumileyo kwezonyango eCanada, esekwe kwi-1965 kwaye yamkela malunga ne-203 yabafundi ngonyaka, ikwisikhundla se-3rd Esona sikolo sonyango sigqwesileyo eCanada nakwi26th emhlabeni. Isikolo sisingatha enye yeenkqubo ezimbini zonyango eCanada yonke eqhuba iminyaka emi-3 kuphela.
Isikolo sikaMichael G. DeGroote sezoNyango siseHamilton, e-Ontario, Canada kwaye sibonelela ngezifundo zonyango ezahlukeneyo kwinqanaba lesidanga sokuqala kunye nesidanga. Isikolo sisebenzisa indlela esekwe kwingxaki ekufundeni ekufuneka isebenze kulo lonke ugqirha.
Le ndlela yokufundisa ibonakele iyasebenza kwizifundo zemfundo kunye nobungcali kumakhondo abafundi kunye nezinye izikolo ze-med ezamkeleyo isitayile ngokunjalo, siqeqesha abafundi ngolwazi lokuqala kwizakhono zonyango ezizodwa, ulwazi kunye nobuchule.
Isungulwe kwi-2005 kwaye esinye sezikolo ze-17 ezamkelweyo kwezonyango eCanada, iSikolo seNyango i-Ontario of Medicine sineekhampasi ezimbini, enye eSudbury kunye nenye eThunder Bay zombini zenzelwe ukufundisa oogqirha kunye negalelo lokhathalelo kwiidolophu ezisemantla e-Ontario, ezilalini nakwiindawo ezikude. .
Esi sikolo saziwa ngemodeli yaso esasaziweyo yemfundo, ugxininiso olunzima ekwenzeni iitekhnoloji, ukusekwa kwengxaki kunye nokufunda ngokwakho, kunye nokuvezwa kwangoko kwizakhono zonyango. Ikwahambelana nezinye izibhedlele eziphambili kwiphondo nakwiindawo ezijikeleze iCanada yiyo loo nto yenza ukuba kube lula kubafundi abaphumeleleyo ukuba bafumane ingqesho.
Ikwabizwa ngokuba yi-Queen's School of Medicine kwiFakhalthi yeSayensi yezeMpilo kwiYunivesithi yaseQueen ejongene nophando, isidanga kunye nesidanga. Yasekwa ngo-1854 kwaye sesinye sezikolo ezaziwayo kwezonyango eCanada esamkela kuphela abafundi abali-100 kulwamkelo lwakhe lonyaka kwiinkqubo zonyango.
Isikolo sibonelela ngeenkqubo zesidanga sokuqala, isidanga kunye neenkqubo zesidanga sokuqala kwiinkalo zonyango ezahlukeneyo ezinje nge-epidemiology, i-neuroscience, i-pathology kunye neyeza lemolekyuli, amayeza emveli kunye nezinye iindlela eziphambili zamayeza ezikhuthaza impilo-ntle yoluntu ngokubanzi.
Esi sisikolo sezonyango esidibeneyo kunye nesikolo samazinyo seDyunivesithi yaseNtshona Ontario, ikwabizwa ngokuba yiSchulich School of Medicine kunye noDentistry, edityanisiweyo kwaye isekwe ngokupheleleyo kwi1997, kwaye yamkelwa njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eCanada.
Isikolo sinikezela ngoGqirha wezoNyango (MD), uGqirha woNyango lwamazinyo (DDS), isiDanga sezoNyango sezoNyango (BMSc), esidibeneyo se-MD / PhD, esidibeneyo se-MD / PhD kunye neenkqubo ezingama-48 zoqeqesho kwezonyango ezilungiselelwe ukukunika okona kulungileyo amava ezonyango, izakhono kunye nolwazi lokufezekisa iinjongo zakho zemfundo kunye nomsebenzi.
Eyasungulwa ngo-1945 kunye neelwimi ezimbini, iYunivesithi yase-Ottawa, i-Faculty of Medicine inikezela ngeenkqubo ezahlukeneyo ze-MD, uphando kunye neeprogram ezibonelela abafundi ngezakhono abazidingayo ukuba baphumelele kwicandelo lezonyango kunye nokukhuthaza impilo yabantu nakwamanye amazwe.
Ubuchule buhlala buchazwa phakathi kwezona zikolo ziphezulu kwezonyango eCanada kwaye ikwamkelwe kwihlabathi liphela ngemirhumo yayo kuphando kwizifundo zesayensi yezempilo kunye nezempilo.
Eli ziko linxulumene ne KwiYunivesithi yaseToronto kwaye yamkelwa njengesinye sezona zikolo zindala kwezonyango eCanada. Yayisungulwa kwi-1843 iyenza ukuba ibe phakathi kwelona ziko lakudala laseCanada kwizifundo zonyango.
Isikolo saziwa kwihlabathi liphela ngokufumanisa kwakhe i-insulin, iiseli ezinesiqu kwaye yindawo yokuqala yokufakelwa kwemiphunga kabini nasemhlabeni.
Igalelo lakhe kwindawo yezonyango lenze ukuba iziko libe yindawo enkulu yokufunda, ukuxhobisa abafundi ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kunye nezakhono ezifanelekileyo ekukhuthazeni impilo yoluntu jikelele kwihlabathi.
Isikolo sezonyango sivelise inani labafundi abaziwayo kwindawo yezonyango abaye baqhubeka nokusasaza ulwazi lwabo kunye nezakhono kwabanye nakwamanye amaphondo abo, eCanada nakwihlabathi liphela.
IYunivesithi yaseLaval, iFakhalthi yezoNyango yasekwa ngo-1853 kwaye sesinye sezikolo zonyango eCanada, ezibonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zokuthweswa isidanga, iinkqubo zesidanga sokuqala kunye nezidanga zokuqala eziza kukhulisa amandla akho kwisayensi yezempilo kwaye zikhulise ukukhula ngokupheleleyo umsebenzi ophumeleleyo wobungcali.
Unomdla wokuya apha? Jonga uninzi lweenkqubo zakhe zokufunda kwisayensi yezempilo, nokuba kukwezamayeza, ukubuyisela kwisimo sangaphambili, inzululwazi ye-biomedical, okanye uphando lwezonyango, ukuhanjiswa kolwazi kunye nokuqhubeka kwemfundo kwaye ube yingcali yezempilo eqinisekisiweyo.
Le fakhalthi yamkelwe njengesikolo sokuqala kwezonyango eCanada, yasekwa kudala phaya e1829 eyenze ukuba ngokusemthethweni kube licandelo lezonyango lokuqala elasekwa eCanada.
I-faculty ivelise ezinye ii-alumni ezithile zazo ezinye zeembasa zeNobel. Isikolo savelisa abafundi ababeyinxalenye yokusekwa kwe Isikolo seYunivesithi yaseJohn Hopkins kwaye i Isibhedlele saseJohns Hopkins eMelika
Oko wasekwa, i-faculty khange isilele ekuboneleleni ngezakhono ezikumgangatho wehlabathi kwezonyango kubafundi bakhe abamkelweyo kunye nokubuyisela kubantu baseCanada nakwilizwe liphela.
Isikolo sikwabonelela noluhlu olubanzi lophando kunye nezifundo zonyango phakathi kwizidanga zokuqala, izidanga kunye nenqanaba lokufunda.
IYunivesithi yaseMcGill, iFakhalthi yezoNyango iphakathi kwezona zikolo ziphambili kwezonyango eMntla Melika kwaye iyonwabele igama elaziwa kumazwe aphesheya ngokugqwesa ekufundiseni, kuqeqesho lweklinikhi kunye nophando olulungiselela iingcali zezempilo kunye nososayensi ukuba baphumelele kwimisebenzi yabo.
IYunivesithi yaseMontreal, iFakhalthi yezoNyango yasekwa ngo-1843 kwaye inemisebenzi emithathu yezemfundo, uphando kunye nokuphuculwa kwempilo kwiindawo zesayensi yezonyango, isayensi esisiseko kunye nesayensi yezempilo.
I-faculty iseke amasebe e-15 kunye nezikolo ezibini ezibonelela ngeziqinisekiso zesidanga sokuqala kunye nezidanga kwizifundo ezikhoyo eyunivesithi. Iziqinisekiso ziyavunywa ngamaziko ezonyango kwihlabathi liphela, ngenxa yoko ukufumana umsebenzi akuyi kuba ngumsebenzi onzima kuwe konke konke.
I-faculty ikwanabo oonjingalwazi abadumileyo abanikezela ngolwazi olusemgangathweni kwezonyango kunye nezakhono kubafundi ukubenza babe ziingcali zezempilo ezikumgangatho ophezulu kwaye babakhokele empumelelweni.
IYunivesithi yaseSherbrooke, iFakhalthi yoNyango kunye neSayensi yezeMpilo sesinye sezikolo zonyango eCanada ezibonelela ngeenkqubo zobugqirha kwezophando, izifundo zesidanga sokuqala kunye nezidanga zokuqala. Isikhundla sinamasebe ali-17 amiselwe kakuhle anje ngeMedicine, iPathology, iPediatrics, Utyando, amayeza eNyukliya, iZifo, iZiko lobuNesi njalo njalo.
Isikhundla sineeNjingalwazi eziphezulu ezizinikeleyo ekuboneleleni ngezakhono zonyango ezikumgangatho wehlabathi kubafundi bakhe ukubanceda baphumelele kwimisebenzi yabo.
Esi sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseSaskatchewan kwaye sesinye sezikolo zonyango eCanada kwaye kuphela kwiphondo laseSaskatchewan laseCanada. Ikholeji inamasebe amiselweyo ali-19 anje ngeMicrobiology, Surgery, Obstetrics and Gynecology, Anatomy and Cell Biology, Ophthalmology, Pharmacology, Family Medicine namanye.
La masebe enzelwe ukuxhobisa abafundi ngezakhono ezikumgangatho wehlabathi eziza kuba negalelo ekukhuthazeni impilo yabantu kunye nokupheliswa kwezifo kwihlabathi liphela.
IYunivesithi yaseSaskatchewan, iKholeji yezoNyango ibekelwe ukuphucula impilo ngophando olunzulu kunye nolwazelelelo kunye nemfundo, ubunkokeli, ukubandakanyeka koluntu, kunye nophuhliso lwezakhono, oogqirha abanobuchule kunye nososayensi.
Ezi ziinkcukacha zezikolo zonyango ezili-17 eCanada, amakhonkco anikezelweyo aya kukusa ngqo kwiphepha lasekunene apho unokufumana khona ezinye iinkcukacha eziza kukunceda ukwamkelwa kwakho. Ndibonelele ngemfuno yokwamkelwa ngokubanzi yokungena kuso nasiphi na isikolo sezonyango eCanada kodwa kusafuneka wenze uphando ngakumbi ngokubhekisele kwezinye iimfuno ezizezona sizathu sokubonelelwa konxibelelwano.
Ezi zikolo zonyango eCanada zaziwa kwihlabathi liphela ngemfundo ekumgangatho ophezulu kunye nesitayile sokufundisa esikumgangatho wehlabathi esinikezelwa ngeenkqubo zakhe ezahlukeneyo kunye noonjingalwazi abaphezulu abasoloko bekhona ukukunika izakhono kunye namava okuphumelela kwindawo yezonyango.
Kubalulekile ukuba ufake isicelo kwizikolo zonyango ezinenqanaba lokumkelwa okuphezulu kwaye uqiniseke ukuba uhlangabezana neemfuno zokufaneleka kunye neenqobo zokugweba, uhlala ukhumbula ukuba ezi zikolo zinokhuphiswano oluphezulu kakhulu ke kuya kufuneka ufumane yonke into ilungile ngaphambi kokuba ufake isicelo sokwamkelwa.
IYunivesithi yaseBritish Columbia Iimfuneko | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Iimfuno zeYunivesithi yaseAlberta | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Iimfuno zeYunivesithi yaseToronto | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Izikolo ze-MBA e-USA Ngaphandle kwe-GMAT yaBafundi beZizwe
Ukufumana njani ukungena eKhanada nge-MBBS
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Isifundo eCanada | Ukwamkelwa | Ulwabiwo-mali | Imirhumo | Izibonelelo neMali mboleko
uluhlu lwezikolo zonyango eCanadaIzikolo zonyango eCanadaIzikolo zaseCanada kwiinkqubo zonyango
Post Previous:Iinkqubo ezili-13 zeSatifikethi soNyaka esi-1 eziHlawula kakuhle eCanada
Okulandelayo Post:Isikolo seBhayibhile se-13 esiScholarship saBafundi bamanye amazwe